Twitter waa Mashiinka Raadinta Cusub | Martech Zone
Twitter waa Mashiinka Raadinta Cusub
Sabtida, Maarso 15, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan hadda la socda 341 folks on Twitter. Waxaan la xiriiray Twitter oo waxaan ka codsaday inay awood u yeeshaan 'auto-follow'. Taasi waxay ka dhigan tahay haddii aad i raacdo, anigaba si toos ah ayaan kuu raacayaa. Maahan wax la diiwaangeliyey ama kuma jiro is-dhexgalka adeegsadaha… laakiin qof ayaa ii sheegay arrintaas, sidaa darteed waan codsaday oo Twitter-ka ayaa si naxariis leh u suurtageliyey.
Waxaa jira doodo badan oo ku saabsan shabakadda oo ku saabsan Twitter waana laga yaabaa ama waa laga yaabaa ma be a qashin of waqtiga.
Maaddaama aaladaha isgaarsiinta cusub iyo teknoolojiyada ay ka muuqdaan shabakadda inta badan isbeddel ku yimaada adeegsigooda taas oo, laga yaabee, in aysan abuureyn abuurayaasheeda. Maanta oo kaliya ayaan ogaaday inta aan u adeegsado Twitter-ka sidii Mashiinka Raadinta, iyo sida dadka kale ay iigu adeegsadaan Mashiinka Raadinta. Waxay ila tahay aniga in Twitter ugu dambeyntii laga yaabo inuu xoogaa yar ka baxo tiknoolajiyada kale - laga yaabee tusaalaha gobolka inuu yahay ChaCha, mashiinka raadinta ee maskaxda ku shaqeeya.
ChaCha had iyo jeer ma helin ka ugufiican -saxaafadeed - oo anigu si daacadnimo ah weligey umaan fahmin waxa kiiska ganacsigu u ahaa. Aadanaha raadinta raadinaya ayaa umuuqda mid aan waxtar lahayn. Waxaana laga yaabaa inay tahay… haddii aad shirkad tahay oo aanad beel ahayn.
Taasi waxay tiri, faa'iidada Twitter-ka oo ah mashiin raadinta waa mid cajiib ah. Waxaan isku hareereeyay khubaro ganacsi, saaxiibo iyo asxaab aan ku riyaaqo wadaagista iyo wax ka barashada. Waan xushmeeyaa iyaga si madaxbanaan, iyagu ma ahan dad qariib ah dhamaadka webka. Iyo sida tirada dadka aan bilaabay inaan raaco ay u sii badatay - sidoo kale tayada iyo tirada jawaabaha aan helay markii aan su'aal galiyo.
Markii aan wax ka weydiiyay tifaftiraha sawirrada khadka tooska ah, laba qof ayaa isla markiiba ku jawaabey Aviary. Markii aan weydiistay a Slideshare beddelaad (wax badan ayey hoos u dhacayeen beryahan), waxaan helay wax aan ka yarayn toban jawaabood. IYO, Waan awooday inaan kajawaabo oo 'wanaajiyo-hagto' su'aashayda si aan runtii u helo xalka saxda ah. Iyadoo Twitter, Waan turxaan bixin karaa raadintayda, fikradaha waan heli karaa, iyo talooyinka sida ugu dhakhsaha badan ee aan u gujin karo natiijooyin dhawr ah Google.
Haddii aad ka walwalsan tahay inaad raacdo waxyaabo badan oo ku saabsan Twitter, laga yaabee inaad ka fikiri karto aragti ka duwan. Twitter waa mashiinkeyga Raadinta cusub.
Tags: Suuq GoobidTwitterraadinta twitter
Video: Fahmitaanka Twitter
Mar 15, 2008 at 11: 31 AM
Ma ahan inaan u ekaado haa-nin, laakiin waxaan ku raacsanahay erey kasta. Twitter wuxuu ahaa mid cajiib ah oo ka caawiyay helitaanka macluumaadka. Dadka halkaas jooga gebi ahaanba waa cabsi badan yihiin.
Mar 15, 2008 at 7: 13 PM
Doug, ka dib markaan akhriyay qoraalkaaga, waxaan kaliya u tegey inaan isqorto. Si kastaba ha noqotee, qof ayaa isticmaalay magacayga isticmaalaha, markaa waa inaan beddelaa. Dhibaatada kaliya ayaa ah, wali ma aqaano sida loo noqdo qof raacsan ama sida loo raaco qof. My username waa dratanone. Fadlan ma igu dari kartaa liistada raacayaashaada? Mahadsanid, Doug.
Mar 15, 2008 at 10: 47 PM
Waan eegay waana ku raacayaa markaa waxay umuuqataa inaad ogaatay!
Farxad & ku arag on Twitter!
Mar 15, 2008 at 7: 46 PM
Boostada weyn Doug iyo anigu waan oggolahay - waxay noqon kartaa kheyraad dhab ah! Hada waan kugu darayaa!
Mar 16, 2008 at 12: 25 PM
Hadda waxaad ku isticmaali kartaa ChaCha adoo adeegsanaya Twitter. Tag http://www.twitter.com/ChaCha oo raac twitter. Kadib haddii aad sameyso fariin toos ah (d ChaCha) oo leh su'aal, waxaad kula soo noqon doontaa fariin toos ah oo jawaabtaada ah. Waxay ku xireen adeegooda jawaabaha qoraalka 242242 Twitter-ka.
Mar 16, 2008 at 2: 42 PM
Xaqiiqdii isku si ayaan u ahay… Malaha Raadinta Bulshada ayaa dib u noqotay. Twitter wuxuu beddeli doonaa SEO… Taasi waxay noqon doontaa my tijaabo - iskuday inaad raadiso balooggeyga 😛
Mar 17, 2008 at 6: 53 AM
Maanta oo kaliya ayaan bilaabay isticmaalka Twitter. Xoogaa waan ku daahay bandwagon, laakiin waxaan hubaa inaan arki karo sababta dadka kale ugu arkaan inay faa'iido badan leedahay.
Waxaan rajeynayaa inaad fiicantahay, Doug.
Mar 17, 2008 at 3: 54 PM
Douglas- Sidoo kale waxaan ahay taageere weyn oo twitter ah. Waxay kuu suurta gelineysaa inaad kula xiriirto gabal yar oo nuxur u ah waxa aad ka fakaraysid ama wadaagaysid. Ku darsoo Twitter-ka waxaa ka buuxa kuwa hore u soo bartay iyo kuwa jecel webka. Ma aanan maqlin gawaarida gawaarida, laakiin waa muuqaal aad u fiican! Waad ku mahadsantahay wadaagida midkaas.